Mitohy ny fanararaotana. Misy mpivarotra efa nampidina ny vidin’ireo sakafo heverina ho mitondra otrikaina toy ny voasary makirana ihany saingy ny vidin’ny legioma toy ny Ovy indray no tsikaritra ho midangana. Manodidina ny 3500 ka hatramin’ny 4000 ariary izany, raha ny hita tamin’ity 24 martsa 2020 ity. Raha ny fanazavan’ireo mpivarotra dia isan’ny manahirana azy ireo ny toe-draharaha satria tsy toy ny tombony hita ao anatin’ny tsena ara-dalana ny tsena hita ao anatin’izao krizy izao, indrindra moa, fa voafetra tsy fidiny koa ny ora azo hivarotana.Nisy omaly ireo trano fivarotana voatery nakatona noho ny tsy fanajana ny lamina napetraka, mbola hitohy ny fitsirihana; nilaza kosa anefa ny fitondram-panjakana fa hisy ny fandaminana hiarahana amin’ireo mpambongady mba tsy hahalafo any am-piaingana ny entana;ny tanjona dia vidin’entana zakan’ny vahoaka no hita eny an-tsena, mandray ny andraikiny ny fanjakana hahatongavana amin’izany.